Si dhakhso ah u hawlgelinta shahaadooyinka caafimaadka dijitaalka ah ee socdaalka hawada ayaa lagu booriyay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Si dhakhso ah u hawlgelinta shahaadooyinka caafimaadka dijitaalka ah ee socdaalka hawada ayaa lagu booriyay
In kasta oo daraasiin diyaarado iyo dalal ah ay geeyeen shahaadooyin iyo barnaamijyo caafimaad oo dhijitaal ah, xawaaraha qaadashada aaladahaan ayaa ahaa mid gaabis ah oo aan sinnayn.
Duulimaadyada ganacsigu waxay bilaabeen socod dheer oo qunyar socod ah oo ay kaga soo baxeen dariiqa safarka ee uu abuuray masiibada COVID-19.
Warshadaha diyaaraduhu waxay u baahan yihiin qalab dhijitaal ah oo caalami ah oo la wada oggol yahay oo u saamaxaya dadka socotada ah inay soo rartaan oo ay wataan xaaladdooda tallaalka, natiijooyinka imtixaankii dhowaa ama xaaladda soo kabashada COVID-19.
Marka safarku sii socdo, shirkadaha diyaaradaha, shaqaalaha amniga iyo socdaalka iyo wakiilada xakamaynta xuduudaha waxay u badan tahay inay la kulmaan tijaabooyin iyo dokumentiyo tallaal oo la yaab leh si loo hawlgeliyo.
Hay'adda Badbaadada Duulimaadka ayaa maanta ugu baaqday warshadaha duulista hawada, xeer -ilaaliyeyaasha iyo mas'uuliyiinta caafimaadka adduunka oo dhan inay dardar geliyaan horumarinta shahaadooyinka caafimaadka dijitaalka ah ee heer caalami iyo kuwa caalamiga ahba isla markaana si ballaaran loogu hawlgeliyo 12 -ka bilood ee soo socda.
“Duulimaadyada ganacsigu waxay bilaabeen socod dheer oo gaabis ah oo ay kaga soo baxeen dariiqa safarka ee uu abuuray masiibada COVID-19, laakiin xitaa safarka ugu badan ee caalamiga ah waxaa ka buuxa jahwareer iyo jahawareer ku saabsan dukumiintiyada la aqbali karo, shuruudaha tijaabinta iyo daawashada karantiiliyada, waligaa ha ka fikirin halista natiijooyinka baaritaanka COVID ee been abuurka ah ama khiyaanada heerka tallaalka, ”ayuu yiri Madaxweynaha Aasaasaha iyo Maamulaha Guud Dr. Hassan Shahidi. "Si loo xoojiyo badbaadada caafimaadka rakaabka waxaan u baahanahay aalad dijital ah oo la aqbalay oo caalami ah oo u saamaxaysa dadka safarka ah inay soo rartaan oo ay wataan xaaladdooda tallaalka, natiijooyinkii tijaabadii ugu dambeysay ama xaaladda soo kabashada COVID-19, taasina waa la aqoonsan doonaa waana la aqbali doonaa meel kasta oo ay tagaan," ayuu yiri.
Halka daraasiin shirkado diyaaradeed iyo dalal ay geeyeen shahaadooyinka caafimaadka dijitaalka ah iyo barnaamijyada, xawaaraha qaadashada qalabkan ayaa ahaa mid gaabis ah oo aan sinnayn. Mu'asasaddu waxay ka walaacsan tahay in marka safarku sii socdo, shirkadaha diyaaradaha, shaqaalaha amniga iyo socdaalka iyo wakiillada kontoroolka xuduudaha ay u badan tahay inay la kulmaan taxaddar badan oo tijaabooyin iyo dukumiintiyada tallaalka ah si loo farsameeyo.
"Habka kaliya ee warshaduhu u awoodi doonaan inay hore ugu sii socdaan si nabadgelyo leh iyo hab kalsooni gelisa safrayaasha, shaqaalaha warshadaha duulista, sharciyeeyayaasha iyo mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa ah haddii dhammaan daneeyayaashu ay isu yimaadaan oo ay mudnaanta siiyaan horumarinta iyo qaadashada aaladahaas," ayuu yiri Capt Conor Nolan, oo ah guddoomiyaha Guddiga Guddoomiyeyaasha Aasaaska. "Waxaan u baahanahay xalal la miisaami karo, wada shaqeyn kara oo hubiya in xogta xasaasiga ahi ay ahaato mid sugan."
Aasaaska Badbaadada Duulimaadka waa hay'ad madaxbannaan, aan macaash doon ahayn, urur caalami ah oo ku hawlan cilmi -baarista, waxbarashada iyo isgaarsiinta si loo hagaajiyo badbaadada duulista. Hadafka Mu’asasaddu waa isku xidhka, saamaynta iyo hoggaaminta badbaadada duulimaadyada caalamiga ah.